Golaha Shacabka oo ogolaaday inuu Bangiga Dhexe maamuli karo qof ajnabi ah – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo ogolaaday inuu Bangiga Dhexe maamuli karo qof ajnabi ah
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod gacan taag ah ku meel-mariyay Wax-ka-beddel lagu sameeyey Xeer ka Bankiga Dhexe, oo lagu daray qodob ogolaanaya in Xilalka Sare ee Bangiga uu qaban karo qof kasta oo aqoon sare u leh. Kulanka, oo ay xaadir ahaayeen 175 Xildhiban, waxaa Wax-ka-beddalka Xeerka Bangiga Dhexe ogolaatay 158 Mudane, waxaana diiday 17 Mudane, mana jirin Xildhibaan ka aamusay. Sidaa ayuu Wax-ka-beddelkii lagu sameeyey sharcigaaas inuu ansax yahay ku dhawaaqay Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal.
Inta aan codka loo qaadin Xeerka Bangiga Dhexe waxaa Xildhibaannada loo ogolaaday in ay ka doodaan. Wasiirka Maaliyadda Xukumadda Federaalka Soomaaliya (XFS), Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo go’aanka Golaha Shacabka ay ku ogolaadeen inuu Bagiga Dhexe Maamulo qofka ugu sareeya. “Waxaan ku faraxsanahay dooddii cafimaadka qabtay ee aad ku dooddeen iyo sida ugu dambayn aad u codayseen” ayuu yiri Wasiir Beyle
Xildhibaan Sakiye Xaaji Maxamuud ayaa ku kaftamay Xeerka la horkeenay Golaha Shacabka, isaga oo Guddoomiyaha Golaha ku yiri “Gudoomiye Ma hubtaa in warqaddaan ay kaaga timid Xukumadda, oo ay isku raaceen Golihii Wasiirada”. Xildhibaan Sakariye wuxuu ku sheegay “Qayaano Qaran” in sharcigaan la meel-mariyo. “Waxaa na daawanaya dadkii aan matalaynay, oo naga war sugaya, waana dad aqoonyahano ah oo og waxa aan samaynayno” ayuu yiri Xildhibaan Sakariye. Xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud waxaa, inta uusan Goluhu ansixin Wax-ka-beddelka lagu sameeyey sharcigaas, uu ugu digay Golaha Shacabka in ay meel-mariyaan.
Xildhibaan Dahar Amiin Jeesoow ayaa sheegay in Bangiga Dhexe hada uu ku shaqeeyo wax uu ku tilmaamay “qabiil iyo 4.5”. Waxa uu taas qiil uga dhigay iney wax fiican tahay in Xeerka Bangiga Dhexe wax lagu daro ama laga dhimo. “Waxaad rabtaan in lagu shaqeeyo qabiil iyo waxaan haboonayn, waxaana la badalayaa Xeerka Bangiga Dhexe” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow. “Waxaa loo dhiibayaa Bagiga gaalka midka ugu madow” ayuu Xildhibaan Jeesow ku daray hadalkiisa. Waxa uu ugu baaqay Xildhibaannadda in ay wax-ka-beddelaan Xeerka, kadibna ay u codeeyaan.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ku sheegay Wax-ka-badalka Xeerka Bangiga Dhexe “Qiyaano Qaran”. “Waxaan idiin sheegayaa in Xeerkaan uu yahay mid aan sax ahayn, mana ahayn in Guddoonka Golaha Shacabka uu qabto, oo uu horkeeno Golaha” ayuu yiri Xildhibaan Cabdullaahi. Saxaafadda ayuu u soojeediyey in ay diwaan galiso Xildhibaannadda hor boodaya Xeerkaan, si ay u xusto taariikhda, loona ogaado.
Xildhibaan Cali Jaamac Jangali ayaa sheegay in aysan aamini karin war uu Wasiir ka hor sheegay Golaha Shacabka, oo uu kala jeeday Wasiirkii hadalka kaga horeeyay ee Waxbarshada, Cabdullaahi Godax. “Waxaan aad ugu Xumahay in, Xeer 60-kii lagu qoray shaqada dalka waxaa iska leh muwaadinka, hadda la baddalo, waana wax aanan qaadan karin” ayuu yiri Xildhibaan Jangali. “Waxaan haysanaa Aqoonyahano Caalami ah, oo ka soo shaqeeyay Bangiyo Caalami ah, marka yaan dadka laga aamin bixin” ayuu Jamgali hadalkiisa raaciyay.
Xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa isaguna sheegay sheegay in ay Xildhibaannada Golaha Shacabka ay aqriyaan Xeerka, oo ay joojiyaan cadiifadda, “si looga wadda shaqeeyo” buu yiri “horumarka dalka”. Waxa uu yiri “Dhamaanteen waxaan nahay waddaniyiin. Majiro Xildhibaan ka wadanisan Xildhibaan kale ee aan xeerkaan badalno, oo aan u codayno” ayuu yiri Xildhibaan Sadiiq Warfaa.
Xildhibaannada Golaha qaar ayaa ku dooday in aysan sharci ahayn in haddii dib-u-eegis lagu sameynayo xeer yiilay lagu kala baxo hal kulan. Waxay soojeediyeen in wax-ka-beddelka xeerarka ay tahay iney maraan Aqrinta 1-aad, 2-aad iyo 3-aad. Hase ahaatee, taas ma qaban Xeerka Bangiga Dhexe ee wixii laga beddelay isla markii laga beddelayba Goluhu wuu u codeeyey, waana la ogolaaday.
Sida ay warbaahinta gudaha baahineysay todobaadkan, sababta ugu weyn ee isbeddelkaas loogu sameeyey Xeerka Bangiga Dhexe waa in uu Guddoomiye ka noqdo Nigel Roberts, oo u dhashay dalka Ingiriiska, kaas oo leh qibrad dhinac dhaqaalaha ah. Hase ahaatee, arrinkaas wali xukumaddu si rasmiya ugama hadal.
Golaha Shacabka oo kulankiisii maanta ku ansixiyey Xeerka Hanti-dhawrka Qaranka
Deni oo Gaas maanta kala wareegay Xilkii Madaxweynaha Puntland